မော်လဒိုက်နိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
မော်လဒိုက်နိုင်ငံ၏ တရားဝင်အမည်မှာ မော်လဒိုက်သမ္မတနိုင်ငံ ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ အတွင်းမှ ကျွန်းနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ၏ အနောက်တောင်ဘက် ၄၃၅မိုင် (၇၀၀ ကီလိုမီတာ အကွာ) နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၏အနောက်တောင်ဘက် ၂၅၀ မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် အိန္ဒိယနှင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိသည်။ ကျောက်‌ခတ်ကျွန်းဝိုင်း ၂၆ ခုတွဲသည် မြောက်ဘက် အီဟာဗန်ဓိပ္ပိုဟူကျွန်းဝိုင်းမှ တောင်ဘက် အဒ္ဒူမြို့ထိ ဖြန့်ကျက် တည်ရှိသည်။ အကြမ်းဖျင်း တိုင်းထွာသည့်အခါ ၂၉၈ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၁၅ စတုရန်းမိုင်) ပါဝင်သော မော်လဒိုက်သည် ကမ္ဘာတွင် ပထဝီဝင်အရ အကွဲကွဲအပြားပြား အဖြစ်နေဆုံး နိုင်ငံများတွင် တခု ဖြစ်သကဲ့သို့ ၃၉၃၅၀၀ ယောက်သာ ရှိသော နေထိုင်သူ ပမာဏ အနည်းငယ်ကြောင့် ကုန်းမြေဧရိယာ အရကော၊ ‌လူဦးရေအရပါ အသေးငယ်ဆုံး အာရှ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ မာလီသည် မြို့တော် ဖြစ်ပြီး၊ လူနေထူထပ်ဆုံး မြို့ ဖြစ်သည်။ အလယ်ပိုင်းနေရာတွင် ရှိ၍ ဘုရင်ကြီးကျွန်းဟု အစဉ်အလာအရ ခေါ်ဆိုသည်။
နိုင်ငံတော် သီချင်း: National Salute
မိုဟာမက် ဝါဟိ ဟာဆန်
• လွတ်လပ်ရေးရခြင်း (ယူကေမှ)
၂၆ ဇူလိုင် ၁၉၆၅
၂၉၈ km² (၁၁၅ sq mi) (အဆင့်: ၂၀၆)
၃၉၆,၃၃၄ (အဆင့် - ၁၇၆)
၁၀၃၆.၉/km² (၂,၈၆၆.၉/sq mi) (အဆင့် - ၁၁)
အလယ် · ၁၀၇
မော်လဒိုက်ကျွန်းဆွယ်များသည် ခါဂေါ့နှင့် လက်ရှက်ဝိ ကျောက်‌ချပ်တို့ကို ပေါင်းစည်းကာ ကမ္ဘာ၏ ဇီဝဒေသ ဖြစ်ပေါ်စေသော၊ ထို့ပြင် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာတွင် ကျယ်ပြောသော ရေအောက် တောင်တန်းကြီး ဖြစ်သည့် ခါဂေါ့-မော်လဒိုက်-လက္ကာဒိုက် တောင်စွန်းကြီး ထိပ်တွင် တည်ရှိနေသည်။ ပျမ်းမျှ မြေပြင်အမြင့်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်မှနေ၍ ၁.၅ မီတာ (၄ ပေ ၁၁ လက်မ) ရှိ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနိမ့်ဆုံး တိုင်းပြည် ဖြစ်ပြီး၊ ထိုနိုင်ငံ၏ အမြင့်ဆုံးနေရာ အမှတ်သည်ပင် ၂.၄ မီတာ (၇ ပေ ၁၀ လက်မ)သာ ရှိ၍ ကမ္ဘာပေါ်တွင် အနိမ့်ဆုံး ဖြစ်သည်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုကြောင့် အန္တရာယ် မကြာခဏ တွေ့နေရာ၊ အစိုးရက ၂၀၁၉ ခုနှစ် အရောက်တွင် မော်လဒိုက်ကို ကာဘွန် ကင်းစင်သော နိုင်ငံ ဖြစ်စေရမည်ဟု ၂၀၀၉ ခုနှစ်က ကတိပေးထားသည်။
မော်လဒိုက်ကျွန်းနိုင်ငံသည် ဘီစီအီး လေးရာစုကတည်းကပင် အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နှင့် သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ ကူးလူးဆက်ဆံမှု ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ မော်လဒိုက်ကျွန်းဆွယ်သည် ၁၂ ရာစုတွင် အစ္စလာမ် ဘာသာ ကိုစတင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကျသည်။ အာရှနှင့် အာဖရိကတို့နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ခြင်းတို့၌ ဖွံ့ဖြိုးခဲ့သည်။ ၁၆ ရာစုအလယ်ပိုင်းမှ စ၍၊ ဥရောပ ကိုလိုနီပြု နိုင်ငံများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံရပြီး၊ ၁၈၈၇ တွင် ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ လက်အောက်ခံ နိုင်ငံ ဖြစ်လာသည်။ ၁၉၆၅ တွင် ဗြိတိန်က လွတ်လပ်ရေး ပေးပြီး သမ္မတ ရွေးကောက်ကာ သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်သည်။ နောင်ဆယ်စုနှစ်များစွာတွင် နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ရန် ကြိုးပမ်းနေကြခြင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရခြင်းတို့ကြောင့် လူသိများလာသည်။
မော်လဒိုက်သည် တောင်အာရှနိုင်ငံများ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး အသင်း (South Asian Association for Regional Cooperation - SAARC) တို့၏ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ၊ အစ္စလာမ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Organization of Islamic Cooperation)နှင့် ဘက်မလိုက် လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့(Non Aligned Movement) တို့တွင်လည်း အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က မော်လဒိုက်ကို အလယ်အလတ် ဝင်ငွေ ရရှိသော အထက်တန်း စီးပွားရေး ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်သည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို ရှေးယခင်ကတည်းက ကြီးကျယ်စွာ လုပ်ကိုင်လာပြီး၊ ယခုအခါ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်း လျင်မြန်စွာ တိုးတက်လာသည်။ လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်း မြင့်မားသည်ဟု သတ်မှတ်ခံရသော တောင်အာရှ နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံတွင် ပါဝင်ပြီး၊ သီရိလင်္ကာနှင့် အပြိုင် ဖြစ်သည်။ မော်လဒိုက်သည် ဇူလိုင် ၁၉၈၂ ခုနှစ်ကတည်းက ဓနသဟာယအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ (Commonwealth republic) ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း၊ အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ မှတ်တမ်းများကို နိုင်ငံတကာက ဝေဖန်သည့်အခါ ဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့် အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ တွင် ဓနသဟာယ အဖွဲ့မှ နုတ်ထွက်လိုက်သည်။
↑ တမ်းပလိတ်:NatGeo ecoregion
↑ Henley၊ Jon။ "The last days of paradise"၊ The Guardian၊ 11 November 2008။ 12 May 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ "[The Maldives] holds the record for the country with the lowest high point on earth: nowhere on the Maldives does the natural ground level exceed 2.3m. Most of [the Maldives'] land mass, which totals roughly one-fifth of Greater London, isagreat deal lower [...], averaging around 1.5m."
↑ "Copenhagen Accord"၊ New York Times၊ 18 December 2009။2July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named HDI
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မော်လဒိုက်နိုင်ငံ&oldid=715874" မှ ရယူရန်
၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။